DIY ugu fiican ee loogu talagalay xayawaanka - Ikkaro
Hadaad gacan yare tahay oo aad jeceshahay DIY ama aad jeceshahay inaad wax ku qabato gacmahaaga oo waxaad raadineysaa inaad u dhisto qalab loogu talagalay xayawaankaaga. Waxaan kuu daynaynaa liiska DIY oo aad ugu samayn karto waxyaabo cajiib ah oo raqiis ah xayawaannadaada, ha ahaadeen haad, eeyo, bisado, kalluun, digaag ama xayawaan kasta.
Waxaan tixgelineynaa mashaariic badan sida kuwa cuntada lagu kala bixiyo oo loo adeegsan karo bisadaha, eeyaha, digaagga, iwm. Abuuritaanka iyo shirarka iyo aquariumyada iyo qaybahooda, iwm.
Iyo wax aad u xiiso badan, kaliya maahan in la abuuro laakiin sidoo kale in wax laga beddelo oo la jabsado walxaha aan horay u leenahay inaan siino nolol labaad ama ka dhigno kuwo waxtar leh oo la jaanqaadaya baahiyaha xayawaankeenna.
Dhammaan adduunka DIY, oo ay ku jiraan qalabkiisa iyo tabaha ay ugu adeegaan xayawaannadayada. Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan dib u warshadeyn karno walxaha maalinlaha ah. Bal eeg waxa aan hayno.
Sida ugu dhakhsaha badan qaybta ay uqaadanayso mugga, waxaan calaamadeyn doonnaa oo u kala saari doonaa casharrada xayawaanka (eyga, bisadda, shimbiraha, kalluunka, digaagga) iyo nooc ahaan (kuwa wax quudiya, waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan, iwm.) Haddii aad ku aragto kala soocid dhib ama shaandho kale xiiso leh, ii sheeg oo waan qiimeeyaa.
Sida loo sameeyo giraangir hamster ah oo ka soo baxa dirawal adag
Halkan waxaan ku haynaa wado kale oo aan ku mari karno ka faa'iideyso dirawal hore oo adag, la sameynaya isaga wheel a for hamsters. Fikradda taayirkan "farsamada" hamster wheel waa inuu ka dhigo mid sidii ugu macquulsan u aamusnaan ah si buuqa hamster-ka ee ku dhex ordaya uusan noo carqaladeyn.
Haddii aad rabto ka iibso giraangiraha 'hamster' aamusnaanta bakhaarkaaga xayawaanka waxaad ogaan doontaa inay qaali yihiin. Burburintaan, waxaad kuheleysaa mashiinkaaga si uu ugu ordo xawaaraha iftiinka adiga oo aan sameyn wax buuq ah.
Waxaan u baahan doonaa disk adag, oo aan ka soo saarayno mashiinka mashiinka.
Cunto siiyaha guryaha lagu sameeyo
Dhowr bilood kahor waxaan daabacnay maqaal ku saabsan sida loo sameeyo quudinta shinbiraha guriga lagu sameeyo.
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa moodooyin kale oo dheeraad ah si aad fikrado u hesho ...
Sida loo sameeyo koronto-dhaliye guri-samee ah oo loogu talagalay aquariums-ka
Dhammaan kuwa haysta ama ka fekeraya sameynta aquarium, macluumaadkan ayaa hubaal noqon doona mid waxtar leh ;-)
Waxay ku saabsan tahay sida looga sameeyo koronto-dhaliye guri-samee ah aquariums-ka.
Soo-saaraha CO2 ayaa loo adeegsadaa in lagu dardar-geliyo sawir-qaadista dhirta, taas oo keeneysa inay koraan oo ay si dhakhso leh u tarmaan, isla markaana isla markaana loo isticmaalo sidii hoos-u-dhige PH ah.
Jiilka u gaarka ah CO2, kaliya sonkorta, khamiirka dabiiciga ah (khamiirka boqortooyada laguma talinayo maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay waxyaabo kiimiko ah) iyo biyo la nadiifiyey.
Taageerada waxaa lagu sameeyaa dhalooyinka Coca-Cola.